နည်းပညာဆိုင်ရာစုစည်းမှုများ: Software antivirus မသုံးပဲ ဘယ်လိုစစ်ဆေးတာလည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး
Software antivirus မသုံးပဲ ဘယ်လိုစစ်ဆေးတာလည်းဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး
ပထမအနေနဲ့ Task Manager လမ်းဘယ်လိုဝင်လာတဲ့ဆိုတာ ပြောထားတဲ့ အတိုင်းလုပ်ပါ ။ (CTRL + Skrif + ESC) ( command prompt ဖွင့်ပြီး "taskmgr.exe) လိုရေးပါ ။ (CTRL + ALT + DEL).Task Manager တက်လာတဲ့အခါမှာ Processes သွားပြီး check what files so are running on your computer.
Start>run>"msconfig" If you fine any files so are connected to any Temporaly Internet files like "temp" at your start up you should uncheck the mark. Since nothing should be pointed to "temp."
အောက်ကဟာတွေကိုလည်း အဲအတိုင်း စစ်ဆေးနိုင်တယ်။
အကယ်၍ သင် message က "Its Disabled by Adminstrator" လိုဖြစ်ခဲ့ရင် မူလအတိုင်း သင်ကွန်ပျူတာမှာ virus ကိုက်နေပါတယ်။
Important tools တွေက disable သွားရင် command prompt and regedit နဲ့ပြင်ပါ။
ဘာကြောင်း ရိုးရိုးလေး disable လုပ်တာလဲဆိုတာ သူတို့ကအလွန်းကောင်းသောကရိယာ တစ်ခုကိုစစ်ဆေးနေပါသည်။ အကယ်၍ကွန်ပျူတာထဲမှာ virus ဝင်ရင် များသောအားဖြင့် normal users တွေက ဘယ်လိုနောက်ထပ်ဖွင့်တာလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာ ဗိုင်းရမ်းတွေက security ကွန်ပျူတာတွေ ကိုနိမ့်ကျအောင်လုပ်နေပါသည်။
ရှာဖွေဖို့ကလည်း လွယ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်တော့ဘူး။ AV တွေနဲ့သင်အမြဲစောက်ကြည့်ဖို့လိုနေပါသည်။
Press "START" and "RUN" type "gpedit.msc" - Adminstrative Template - system - "key" is "Prevent access to the resgisty edition tool" You left click it, and hit
Properties. Now you open the window and you can set it to Activated or Disabled. You set it to Activated.
သင် task manager လုံခြုံစွာသွားချင်လျှင် (CTRL+ALT+DEL) fine the virus Processe.
Delete virus file တွေကိုတွေ့ခဲလျှင် go to Command Prompt press "START" and "RUN" type "cmd" type regsvr32 (virus file name) ကိုတွေ့လျှင် delete လိုက်ပါ။
အကယ်၍အရေးကြီးတဲ့ disconenct from the internet some viruse ဆိုရင် download software လိုက်ပါ။ အကယ်၍မရရင် go to Command Prompt type "netstat -a" so you list poeple so are trying to connect to you. or is connected to you. Check out the host names.
ခင်မင်လျှက်။Win Ba Gem
Posted by P Kyaw Swa at 11:35 PM